Fellaini: Waa Inaan Is Horu Mariyaa Xili Ciyaareedka Dambe
HomeWararka MaantaFellaini: Waa Inaan Is Horu Mariyaa Xili Ciyaareedka Dambe
Marouane Fellaini ayaa mashquul ku aha sidii uu naftiisa iyo xirfadiisaba horumar ugu samayn lahaa kadib markii uu xili ciyaareedkii kali ahaa ee uu ku qaatay Old Trafford noqday mid ku adag oo aanu wax guul ah ka gaadhin la qabsigeeda.
Xidiga reer Belgium ayaa noqday halku dhega dhaleecaynta mashaqadii kooxda shayaadiinta dharka cas ka qabsatay horyaalka Premier League kalkan, isagoo uu tababarihii meesha laga saaray ee David Moyes kagala soo wareegay lacag dhan€30 million naadiga Everton maalintii u dambeysay ee suuqa kala iibsiga sanadkii hore.
Dhaawacyo ayaa inta badan ragaadiyey ciyaaryahanka dhererka u saaxiibka ah ee khadka dhexe tan iyo maalintii uu u soo wareegay Manchester, laakiin wuxuu nidar ku maray inuu isa soo dhisi doono oo uu ku soo celin doono xirfadiisa sidii uu ahaan jiray iyo qiimihii uu ku dhex lahaa isbedelka khadka dhexe.
“Waxaan isku diyaarin doono sidii aan u soo bandhigi lahaa wax qabadkayga, xili ciyaareedka dambe,” ayuu Fellaini ku yidhi wargeyska Daily Telegraph. “Waxaan doonayaa inaan bedqab ku soo noqdo si aan u noqdo mid hawl fiican qaban kara. Xitaa markaan dhaawacanahan waan ciyaaraa laakiin fayo qabka ayaa ka sii wanaagsan.
“Waxaan dhaawac ku maqnaa saddex bilood , waxaanay ii ahayd aniga xaalad adag oo aan markaas ku jiray. Markaad u soo wareegto naadi cusub, waxaad u baahan tahay inaad ciyaarto, waxaad u baahan tahay inaad ku jirto marwalba kooxda, Marka aadan ciyaari karin, way kugu adkaanaysaa inaad kooxda aragto – xataa aad kaydka ka dhex muuqato.
“Marka xili ciyaareedkani dhamaado, waxaan bilaabi doonaa diyaar garowga ka dambe, waana wakhti fiican.”
Talyaaniga Oo Uu Gilgilay Warka Naxdinta Leh Ee Montolivo